Gaa'illii fi fayyummaan hariiroo qabaatu laata? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Gaa'illi fayyuummaaf gumaata
Gaa'iila dhaabbachuun fayyaa nam aa irratti bu'aa yookin miidhaa qabaata jettanii yaaddu?
Qorannoon dhiheenya kana ifa ta'e tokko gaa'illi fayyaadhaaf gumaachusaa beeksiseera.
Keessattu namoota rakkina onnee cimaa fi kolostiroolii olaanaa qabaniif, gaa'illi carraa jiraachuu isaanii kan ol kaasuu ta'usaa qorattoonni ni dubbatu.
Akkasumas haadha warraa fi abbaan warraa wal jaalatan, haalaa gaariidhaan waan wal kunuunsaniif carraan dhibamuu isaanii ni hir'ata jechuun qorattoonni kunneen konfaransii dhimma onnee irratti kan dubbatan.
Qorannichi ga'eessota Yunaayitid Kingidam keessa jiraatan miliiyoona tokko ta'an irratti kan gaggeefamee dha.
Namoonni kunneen hundinuus kan dhibee sukkaaraa, kolostiroolii yookin dhiibbaa dhiigaa olaanaa ta'ee qabani dha.
Qorannichaanis namoonni gaa'ila qaban, kanneen qofaa jiraatan irraa haala fooyya'a ta'ee agarsiisaniiru.
Fuudhaa fi heeruumni gammachuudhaafii?
Dr. Pool Kaartar fi hiriyyoonni isaa mana barnoota wal'aansaa Astoon kanneen qorannicha gaggeessan, gaa'illi dandeettii dhukkuba onnee dandamachuu olaanaa waliin hariiroo qabaachuusaa mul'isaniiru.
Dabalataanis, dabaluu kolostiroolii fi dhiibbaa dhiigaa olaanaa ofiirraa ittisuuf gaa'illi akka gargaaru dubbatu.
Qorannichis dhukkuba onnee dabalatee sababiiwwan du'a namootaa hunda xiinxalee jira.
Namootni gaa'ila qaban umuriin isaanii waggaa 50, 60 fi 70'moota keessatti argamuu fi kolostiroolii olaanaa qaban, waggoota 14 qorannoon kun qoratame keessatti, kanneen gaa'ila hin qabne caalaa %16'n carraa lubbuun turuu qabu.
Haaluma wal fakkaatuunis, warreen dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qabaniif gaa'illi carraa jiraachu akka dabaluuf qorannichi mul'iseera.
Haa ta'u malee, warreen waliin jiraatan, kan wal hiikan yookin, abbaan yookin haatii warraa irraa du'e birratti carraan kun baayyee gadaanaa ta'uunsaa barameera.
Qorattoonni kunneen namoonni gaa'ila isaaniitti gammadoo yaa ta'anii yookin yaa dhiisanii hin qoranne.
Garuu callisanii walitti dhufeenya qabaachu irra jireenya keessatti nama adda ta'e tokko qabaachuun barbaachisaa dha jedhu. Kun garuu namoonni hundi gaa'ila dhaabbachu qabu jechuus akka hintaane eeraniiru.
Nuti "Gahee gaarii gaa'ilaa, bu'aa hiriyaa, maatii fi walitti dhufeenyi hawaasummaa qabuu haala wal fakkaatuun mul'isu barbaanne,'' jedhaniiru.
Dr. Maayik Knaaptoon Faawundeeshinii Onnee Biritish irraa, ''Ergaan as keessaa hubatamuu qabu hariiroon hawaasummaa keenya, akkasumas dhimmoonni akka dhiibbaa dhiigaa olaanaa, nageenyummaa fi fayyummaa keenyaaf dhimmoota baayyee murteessoo ta'usaaniti.''
"Gaa'ila qabaattanis dhiiftanis, dhimmoota dhibee onneetiif isin saaxilan kan qabdan yoo ta'ee, akka isin gargaaraniif namoota jaalattaniif bilbiluu ykn waammachu dandeessu."
Dhimmoota balaa onneetiif nama saaxilan keessaa:
Dhiibbaa dhiigaa olaanaa
Kolostiroolii dhiigaa olaanaa
Sochii qaamaa gochuu dhabuu
Dhukkuba onnee maatiirraa dhufe
Umurii (balaa umurii waliin dhufu)